ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အတွက်၊ငါတို့ရှိသမျှသည်အစဉ်မပြတ်များမှာအတွက်အလုအယက်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းနှစ်သက်ပစ္စည်းများရှိသည့်ခေတ်မီနှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အလွယ်တကူ။ ကျနော်တို့အခါတူအမှုအရာကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအခါကျနော်တို့ချင်သူတို့နဲ့ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံကို။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးမွေ့လျော်ဘဲလျက်စုစုပေါင်းထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ငြိမ်ဝပ်၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး။ ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းများခဲ့ခြင်းမှအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှု၊အမှ၏လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်း။ လုပ်အားဖြင့်၊ဂိမ်း၊မိုဘိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းများရည်ရွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သင်ကျေနပ်မှုအတွက်တိုင်းတစ်ခုတည်းအပျြောအပါးလမ်း။
အပြားပလက်ဖောင်းပူဇော်သင်ပြင်းထန်သောအရည်အသွေးမြင့်မားညမ်းဂိမ်းအသုံးပြုနိုင်သည့်အပေါ်ဖြန့်ချိသို့မဟုတ်လက်ပ်တော့အလွန်အနည်းဆုံး၊သို့သော်အဘယ်အကြောင်းကိုဆဲလ်ဖုန်း? တဲ့နေရာလေးနည်းနည်းစက်ကိရိယာအပြည့်အဝကိုက်အတွက်အသင့်ရဲ့အိတ်သို့မဟုတ်အိတ်နှင့်အစဉ်အမြဲသင့်လက်၌ရှိ၏? ဤသည်မိုဘိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းများစားပွဲပေါ်မှာမှဆောင်ခဲ့တတ်၏။ သူတို့ပူဇော်သောအခြားအရာအားလုံးအကြောင်းတခြားလူတွေရှိပါတယ်၊အပေါင်းအဖျားဝင်နေကြောင်းသန်သန်ဖန်တီးမှုနှင့်တွေ့ရှိဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဘယ်နေရာမှာမဆိုမှ၊လျောက်ပတ်စွာ၏စွန်ပလွံအတွက်အပေါ်သင်၏လက်ကိုသင့်မိုဘိုင်းဆယ်လူလာဖုန်းကို။ သေချာအောင်၊သင်ကကစားနိုင်ပါတယ်၊အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အပြင်းထန်သောဂိမ်းအပေါ်သင်၏တက်ဘလက်သို့မဟုတ်။ သို့သော်အဘယ်ကြောင့်ခံရရုံမှကန့်သတ်ကြောင်း?, အခါသင်ရှိသည်နိုင်အတာကိုအသီးအသီးများနှင့်အသီးအတစ်ခုတည်းတဦးတည်း၏ထုတ်ကုန်? နိုင်ဖြစ်ခြင်းသုံးစွဲဖို့မိုဘိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းအပေါ်သင့်ရဲ့ဆယ်လူလာဖုန်းခွင့်ပြုဖို့သင်ရှိသည်အချို့စွန့်စားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထိုသူတို့သည်မိမိတို့အပေါ်နေစဉ်သင့်ရဲ့လမ်းအလုပ်လုပ်ဖို့၊အစဉ်အပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခရီးစဉ်၊သို့မဟုတ်အခါတိုင်းသူတို့ရမ္မက်တဏှာထိ။ ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောအပေါ်သွားမိတ်ဖက်အတွက်အပြစ်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးအဟောင်းအချိန်။ ဘယ်လိုလည်ပတ်မှုစနစ်သုံး:က၊အ Linus သို့မဟုတ်မက်။ စကားကိုဒါဟာအရေးမပါဘူးရာက္ဇာသင်ရွေးချယ်ဖို့ဂိမ်းအပေါ်၊ဒါကြောင့်စေခြင်းငှါ၊မြေခွေး၊ေပ၊သို့မဟုတ်သည္။, ဒီကိုအသုံးပြုဖို့လွယ်ကူဂိမ်းကစားပလက်ဖောင်းလုံခြုံနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံအဖြစ်အပေါ်ထားပေးခြင်းသင်တို့ကိုသင့်အသက်တာ၏စီး!
မိုဘိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းများရှိပါတယ်၊အသုံးပြုသူများအထောင်ပေါင်းများစွာ၏၊လူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ဖုန်းများ၊မွေ့လျော်သောသူအပေါင်းတို့သည်သင်ဖြစ်နိုင်ဒီနှင့်အတူဆိုက်။ နေသော်လည်း၊သူတို့ရဲ့ကြီးထွားလာအစုအဝေး၊ဆိုက်ဖူးကျန်ရစ်သို့မဟုတ် buffers။ ဒါကြောင့်အလွန်အမင်းအစာရှောင်ပေးကြဖို့အကောင်းဆုံးလွှနှင့်ဂိမ်းပတ်ဝန်းကျင်အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့စက်ကိရိယာသို့မဟုတ်လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုရွေးချယ်ရန်အပေါ်ပူးပေါင်း။ ဟုပြောဆိုနှုတ်ဆက်ပြီးမှအားလုံးအခြားဆိုက်များပေးသောသင်န့်အဖြစ်မိုဘိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းများရှိပါတယ်၊လုံးဝအဘယ်သူမျှမနှင့်အဆင်းလက်၊၁၀၀%အခမဲ့! တစ်စျေးနှုန်းအကြား!, သင်အဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်ထွက်စစ်ဆေးနှင့်ပူးပေါင်းယနေ့အချိန်တွင်၊အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးယူတစ်မိနစ်ထက်လျော့နည်းအတိုက်အခံနှင့်အနီးကပ်တက်ရနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတိအကျအဘယ်ကြောင့်သူတို့ကအရေအတွက်တယောက်မှကြွလာသောအခါ၊မိုဘိုင်းလိင်ဂိမ်းများ။ နှင့်အတူဂိမ်းအဖြစ်၊သင်ရှိသည်စူးစမ်းဖို့လွတ်လပ်ခွင့်သည်အဓိကအမျိုး၊စိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းနေ့စဉ်ညစ်ညမ်းတရားဝင်မပေးနိုင်။ သငျသညျကိုအသုံးပွုနိုငျအများအပြားတယောက် predesigned ဂိမ္းအလုပ်လုပ်တယ်သို့မဟုတ်ကယူပေါ်သို့သင်ကိုယ်တိုင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိင်ပြီ။ ဖန်တီးကြောက်မက်ဘွယ်သောစာမျက်နှာများလိင်တှေနှင့်အတူအားလုံးသင့်ရဲ့ၡမ်ားချွန်သို့မဟုတ်အစိုးနည်းငယ်ပန္လာေ။ သို့မဟုတ်အဘယ်လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိခြင်းအများပြည်သူလိင်တူဥပဒေကြောင်းအရဒါပေမယ့်လိုချင်သောအားဖြင့်အားလုံး။, ဒီဇိုင္းကပူၡမ်ား MILF သင်သေပေါ်တွင်သင့်လက်ကိုရရန်အတူသူတို့ရဲ့အင်္ဂါရပ်ကိုဖန်တီးရန်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်ကောင်များ။ ရွေးချယ်သူမ၏ဆံပင်၊သူမ၏အသံ၊ရွေးချယ်သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်၊သူမ၏ခံ၊ၡမ်ားမတ်မတ်သို့မဟုတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်၏အမျိုးသမီးအတွက်အသားေရာင္။ တက်တူး၊piercings၊သို့မဟုတ်အဓိပၸါယ္အပြစ်ကင်းစင်၏။ ဒီဇိုင်းကိုဘယ်လိုသူမ၏တင်းကျပ်စွာလာျသည်။ သင်ချင်သမျှကိုသင်တို့ကြောင့်ရှိသည်နိုင်ဒီမှာ။ ဖန်တီးအံ့သြဖွယ်လိင်ကမ္ဘာတွင်မိုဘိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းများနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်တိုင်းစိတ်ကူးယဉ်ရှိသည်။ ပင်ပျော်မွေ့မှဇာတ်ကောင်အချို့၏အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းယနေ့စျေးကွက်အပေါ်ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင်။, ငါသိပြီအသေခံဘယ်အရာကိုမြင်ဖို့အဲဒီအမျိုးသမီးကြည့်လို့အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်းနှင့်ပင်အကောင်းတစ်ဦးအချိန်နှင့်အတူသူတို့ကို! ကိစ္စမရှိပါဘူးလျှင်သင်အဆက်မပြတ်ဂိမ်းသို့မဟုတ်ရှေ့မှာဘယ်တော့မှသင့်အသက်တာ၌။ ဒါဟာအရေးမပါဘူးဆိုရင်သင်ကအသစ်ညမ်းဂိမ်းသို့မဟုတ်အဖူးကကြိုးစားမီနှင့်ရုံမျှသာစပ်စု။ ဤအရပ်ဌာနများအတွက်၊ဒီနေရာမှာသင်ရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်သောပျော်စရာအစဉ်အဆက်။ ဒီဆိုက်ကလုပ်ထားခံရဖို့သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပြီးဒီဇိုင်းအဘို့မဆိုနှင့်။ ဒါဟာအရေးမပါဘူးသင့်အချိန်ဇုန်၊တည္ေနရာ၊ဒါမှမဟုတ်ဘာသာစကားကိုပြောလေ။ ဒီဂိမ်းသင်၏စိတ်ကိုမှုတ်တော်မူမည်အတွက်နည်းလမ်းတွေအခြားသူများကိုမတတ်နိုင်သမျှ!
မိုဘိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းဆောင်တတ်၏နှင့်အတူအံ့သြဖွယ်အရည်အသွေးမြင့်မားသော။ သူတို့စာသားအတိုင်းသင်ပေးနှင့်အတူအကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံးသင်၏လိင်ဘဝကိုဖို့လာမယ့်အဆင့်အထိ။ သူတို့ဖန်တီးမှု storylines သေးလည်းပူဇော်ရသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်။ သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုများကွဲပြားသောများမှာအဘယ်ကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်ဂိမ်းကစားကနေအားလုံးသည်ကမ္ဘာအနှံ့သိုးဖို့သူတို့ရဲ့ဆိုက်မှနှစ်သက်ရာကိုသူတို့အကြောင်းအခြားသူတယောက်မျှမပေးနိုင်! အဘို့အနည်ထိုင်ပြီးဘာမှမပြင်တစ်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးမိုဘိုင်းလိင်ဂိမ်းပလက်ဖောင်းကထိခိုက်နာကျင်မည်မဟုတ်သင့်ရဲ့ဘဏ်၊ဒီရုံ၏အစွန်အဖျားရေခဲတောင်များ၏အဘယျသို့မိုဘိုင်းညစ်ညမ်းကစားပြိုင်ပွဲသင်တို့အဘို့ပေးသွားမှာပါ။, အဘယ်သူမျှမနေပါစေသင်သည်သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုသို့မဟုတ်အဘယျသို့သင်သာငမ်းငမ်းလိုချင်သူတို့ရှိသည်။ ခံစားလိင်ဂိမ်းများများအဆင့်မိသားစုများဖြင့်အသီးအသီးအခြားဘယ်လောက်သူတို့ဂရုစိုက်။ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအကောင်းဆုံးနှင့်အတူစမ်းသပ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသီးအသီးအခြားသို့မဟုတ်နှစ်ခုထိကပ်ပျော်စရာရှိခြင်း။ ရီ orgies နှင့် threesomes။ ခံစားကြည့်ပါစအိုလိင်၊အပူဆုံးပါးစပ်ဆွလိင်ဂိမ်းများ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်လက်လုပ္အခြင့္အလမ္းမ်ား။ နားထောင်ရန်အများဆုံးဂုဏ်နှင့်လက်တွေ့ကျညည်းသင်သည်အစဉ်အမြဲပေါ်ကြားရ၏။ ကစားစိတ်ကူးယဉ်ညမ်းဂိမ်းနှင့်ကာတွန်းဂိမ်းသို့မဟုတ်အဘို့အနည်ထိုင်သောသူတို့သည်အကျိုးအတွက်ပိုမိုနီးကပ်လက်တွေ့ဘဝဆောင်ခဲ့၏။, မိုဘိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းများရှိပါတယ်ရာတစ်ခုခုသည်လုံးဝလူတိုင်း၊နှင့်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုလူတိုင်းပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်၊သင်သည်အဘယ်သို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ? အားဖြင့်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုသူတို့အတွက်နံပါတ်တစ်အလွန်ရရှိပြီးသူသုံးစွဲသူများရုံလုံလောက်တဲ့မရနိုငျ!